DVD qoraalka freeware in Guba DVD la Interactive Menu
Hadda waxa filim iyo xataa imaneysay 'jeedo inay ku raaxaystaan ​​faa'iidooyinka technology digital. DVD bixisaa waayo-aragnimo cusub si dhagaystayaasha, oo leh waxyaabo gaar ah, oo tayo leh u kordheen iyo navigation ma bixiyaan VHS. DVD, si kastaba ha ahaatee, wuxuu ahaa isku block-ku turunturoodo DVD ee Creech oo waaweyn oo baahsan. In marxaladdii hore DVD qoraalka ahaa labada adag oo qaali ah. Nasiib wanaag, codsiyada qoraalka DVD cusub sida Encore ka dhigay DVD qoraalka dareen leh oo aan qaali ahayn, kabidda farqiga u dhexeeya fikirka iyo dil. Halkan waxa lagu sharaxay ku saabsan 10ka software qoraalka DVD free ugu fiican.
1. AVStoDVD (Windows oo kaliya)
AVStoDVD waa barnaamij lacag la'aan ah oo leh waxyaabo la yaab leh, oo ay ku jiraan tiro qalabka caadadii si loogu badalo qaabab kala duwan si ay u durdurrada-socon DVD la duubo xiga ee DVD 5/9.
Rakibaadda video iyo maqal ah oo isticmaalaya AviSynth
Encode video iyo maqal ah oo isticmaalaya QuEnc / HCEnc / ReJig / FFmpeg
Subtitles Deji isticmaalaya SubtitlesCreator
DVD qoraalka isticmaalaya MuxMan / BatchMux
Samaynta, Iyo La gubi ISO sanamyadiinna la isticmaalayo ImgBurn
Waxaa la dhisay-in Editor DVD Menu la bedeley customizable
2. Bombono DVD (Linux & Trial for Windows)
Bombono DVD waa u fududahay ah si ay u isticmaalaan barnaamijka DVD-qoraalka. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si ay u abuuraan images of DVD-video in la ciyaari karo heerka DVD-Player. Waxay leedahay gui haboon (Gtk).
Fursadaha Chocolate DVD:
raaxo daawashada video: waqtiga iyo Monitor
Transcoded on baahida (ka AVI / MKV / MOV / MPEG4 iwm)
bedeley kartoon ah oo ku dar subtitles
record folder qoraalka natiijada abuurka ISO-image ama gubi in DVD
reavtoringa: awood u leh inay dajiyaan video ay horay u diiwaan in drive DVD-ROM.
3. Gubashada (Mac OS X)
Guba u Mac 2.5.1 for Mac OS waa barnaamij raaxo iyo functional lagu qoro CD / DVD drives. Iyadoo Guba aad ku qori karta wax files on cajaladaha, reserved rukhsadda helaan, taariikhda abuurka, ku dar icon ah u disc ah, iwm Qoraalka disc audio ama video, mar dambe ma aad u leeyihiin in ay dhibaato diinta, Guba sameeyaan wax walba oo naftayda. Haddii aad rabto in aad ku gubi in DVD video taariikhda qoyska, waxaad samayn kartaa menu ah, waxaa ka doorataa theme aad ugu jeceshahay. Intii lagu duubo disc icon ku xirto ah, wuxuu muujin doonaa bar horumarka ah.
Haddii aad go'aansato in aad samayso mid kuu gaar DVD Video disc aad rabtaa, bandhigyada TV ama sawir ee ilmaha, markaas codsi ugu fiican Wuxuu noqon lahaa DeVeDe. I aamini on hadal, laakiin waxaan shoveled oo dhan ku haboon ujeedada barnaamijka iyo joojiyay on DeVeDe. Waxaan isku dayay iyo DVD Styler, iyo Bombono DVD, iyo ManDVD. Laakiin duwan DeVeDe barnaamijyada tartan rasmi ah, inta badan waxaan la kulmay jiray cayn kasta oo wax aan fiicneyn. Qaladka maktabadaha qaarkood, incompatibility ee files xal oo kala duwan, iyo barnaamijka si fudud u diido in ay encode. Iyadoo DeVeDe dhibaatooyinka sida lagu xallin ku dhawaad ​​laba sano ka hor. Barnaamijku waxa uu ka shaqeeyaa 5 + a.
5. DVDAuthorGUI (Windows oo kaliya)
DVDAuthor waa set fudud qalabka si ay u caawiyaan qoraaga DVD aad. Fikradda waa in ay awoodaan si ay u abuuraan badhamada, bedeley, cutubyada, iwm, laakiin hadda uun qaado il MPEG (sida abuuray by mplex F-8 ka mjpegtools 1.6.0), oo aad ku gubi karaa in DVD.
DVDAuthorgui waa interface aad u fudud u win32. Software DVDAuthorgui waa hab fudud oo ay u abuuraan DVD aasaasiga ah.
6. DVD cirib (Windows oo kaliya)
Ha leeyihiin Roxio abuura ama Nero? DVD cirib waa mid fudud oo degdeg ah si ay u isticmaalaan iyo waxa laga heli karaa lacag la'aan ah! Dhammaan ka mid ah barnaamijka si encode, qoraaga iyo gubi gobolkaaga DVD ee lacag la'aan ah. DVD ee abuuray waa la jaan qaada dhammaan qalabka ka ciyaari kara DVD ee.
DVD cirib waa xoogaa yar oo fudud, weli awood software oo loo isticmaali karo in ay yihiin qorayaasha DVD ee la sheegay in dib u soo ciyaaray karaa in ciyaartoyda DVD caadiga ah. Software waa bilaash inaad kala soo baxdo iyo in la isticmaalo oo waxaa laga heli karaa adigoo tilmaamaya web browser.
DVDStyler taageertaa Windows, Mac OS X, Linux iyo nidaamka ka hawlgala isticmaalaya wxWidgets. Versions Recent waxaa lagu guraa la Barnaamijyada Imaan aan la rabin in laga yaabo in si qalad ah lagu rakibo haddii daryeelka waxa laga soo qaatay intii lagu rakibo.
Tani waa gui asaasi ah oo abuuraya bedeley iyo qeexidda cutubyada. Koob oo waa in lagu hore encoded. By default waxa ay maamushaa dvdauthor, mkisofs iyo growisofs in ay soo saaraan DVD ah dhamaystirtay, laakiin lagu hagaajin karo in ay joojiyaan heer kasta ee nidaamkan.
8. 'S' DVD-Author (Linux)
'S' DVD-Author (Linux) uu leeyahay oo dhan qalabka ay u dhalin movie DVD la menu horyaalka, laakiin waxa ay yihiin oo dhan kala duwan oo adag si ay u isticmaalaan. 'Q'DVDAuthor waa hore-dhammaad qalabka (laakiin ma dareensaneyn sidaas) si ay uga caawiyaan la abuuro video kuu gaar ah DVD-yada. Sidoo kale gui ah ee ku daray bedeley dhaceen iyo submenus, waxa ay isku dubaridi kara oo aanay video files, ku dar subtitles iyo dhalin duubey. Waxaad si fudud gubi karaa ISO ka dhalanaya la K3b ama GnomeBaker et al. Bilow soo degida faylasha aad filim, formatted sida faylasha DVD hooyo vob, ama MPEG, AVI iyo MOV (ku xiran codecs aad ku rakibtay): waxaa jira xitaa Falanqeynta nidaamsan ee codsadaha faylka. Ka dib marka aad daray files filim aad, aad iyaga kaxayn karaan suuqa kala khariidad. Tani waa sida DVD aad ka muuqan doontaa in aad TV, oo ay default file movie kasta oo abuuri doonaa button ah editable for loo maqli karo. Marka lagu daro image hortegi lahaa caado u menu horyaalka, natiijooyinka fiiriyaa aad u xirfad leh.
DVDit Pro 6 - software ah oo khibrad leh DVD qoraalka ka Sonic Solutions --qeybiye adduunka caan ka ah qalab loogu abuuro DVD ah.
Company Sonic Solutions ayaa sii daayay version cusub oo ay software ah ee qoraalka-DVD DVDit Pro HD, taas oo ah waxa lagu gartaa joogitaanka taageero Blu-ray. Intaa waxaa dheer, dabcan, waxa ay kaa caawin kartaa in la abuuro caadiga ah DVD-cajalladaha. Barnaamijku wuxuu siiyaa fursad ay ku leh 32-track Cinwaan editor sideed editor soundtrack track shaqeeyaan ayaa taageeraan DLT iyo CMF, iyo sidoo kale ilaalinta nuqul.
SmallDVD ka gubtay video si deg deg ah oo aan kijinka kasta. Waxaad ku lumin karto theme, menu iyo magaca shaashadaha in software kale, laakiin haddii aad u doonayaa inaan u gubi DVD la videos ku yaal, SmallDVD waa doorashada ugu fiican.
The software DVD qoraalka kor ku xusan waa u bilaash dadka isticmaala. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u baahan tahay qaar ka mid ah oo awood badan, laakiin si sahlan loo isticmaalo software DVD qoraalka qiimo macquul ah, tixgelin Wondershare DVD Creator , taas oo ah aalad awood laakiin si sahlan loo isticmaalo dadka isticmaala kaliya bilaabaya. Download version maxkamad free hoos ku qoran.
Top 10 Goobaha DVD sida DVD Empire
Sida loo sameeyo Own Video DVD
> Resource > DVD > Top 10 Best DVD Free qoraalka Software